सोधिने प्रश्न - शियान Homey प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
दुई झिल्ली एक geotextile
एक झिल्ली दुई geotextiles
लामो फाइबर Nonwoven Geotextile
छोटो फाइबर Nonwoven geotextile
नरम पारगम्य ट्यूब
रिवर्स असमस पानी उपचार प्रणाली
खारा आरओ पानी उपचार प्रणाली
क्षमता 250LPH देखि 50TPH छ
समुद्र पानी उपचार प्रणाली
मानक आरओ पानी उपचार प्रणाली
Waterproofing geosynthetics सामाग्री
Q1: तपाईंको कम्पनी कहाँ स्थित छ?
एक: हाम्रो कम्पनी शियान, शानक्सी प्रान्त, चीन मा स्थित छ।
Q2: तपाईं हाम्रो लागि नमूना प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: हो, हामी स्वतन्त्र नमूनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, तर ग्राहक को माल तिर्नुपर्छ।
Q3: आफ्नो न्यूनतम आदेश मात्रा के हो?
एक: न्यूनतम आदेश मात्रा 5000 वर्ग मीटर छ, तर यो बेचन छ।
Q4: आफ्नो भुक्तानी सर्तहरू के हो?
एक: टी / टी, वेस्टर्न युनियन, एल / सी ...
Q5: तपाईँको वितरण समय के हो?
एक: प्रति दिन 5000-7000 वर्ग मीटर: उत्पादन समय सामान्यतया 3-5 दिन, उत्पादन क्षमता लागत।
आरओ पानी उपचार प्रणाली
यो पानी स्रोतहरु कस्ता प्रकारका व्यवहार गर्नुहुन्छ?
रिवर्स असमस water.tap पानी पनि नगरपालिका स्रोतहरु, undergroundwater रूपमा जानिन्छ, खारा पानी, र saltwater समावेश जो अधिकांश प्रकार मा एक आदर्श पानी उपचार समाधान छ। यी तीन प्रकारका बीच ठूलो भिन्नता प्रत्येक प्रकार को कुल भंग ठोस (TDS) सामग्री हो। औंठी को नियम, अमेरिकी स्वास्थ्य संघ खानेपानी अक्सर कठोरता कम गर्न प्रयोग गरिन्छ छुन पानी वातावरणमा वा मलबे धातु पाइप यात्रा पानी मा सञ्चय 2,000 पीपीएम TDS.Reverse असमस अन्तर्गत छ कि आवश्यक छ। कुल भंग ठोस अक्सर पानी धाराको पानी systems.Underground reservoirs पानी शुद्धीकरण एक लक्ष्य हो अक्सर खारा छन् तिनीहरूले नुन को ठूलो मात्रा समावेश अर्थ, तर नुन पानी छलफल गर्न पर्याप्त छैन। भूमिगत भन्दा अक्सर कृषि उद्योग, खानी उद्योग लागि purified छ। भूमिगत पनि अद्वितीय खनिज संयोजन अक्सर एक आकर्षक स्वाद छ किनकी, bottling उद्योग को एक बेशकीमती लक्ष्य छ।
नुन पानी उल्टो असमस (कहिले काँही desalination रूपमा उल्लेख) खानेपानी मा saltwater को मोड़। महासागर पानी 45,000 पीपीएम TDS सम्म छ। Desalination को सबै भन्दा ठूलो प्रयोगका ताजा पानी नियमित आपूर्ति कमी कि क्षेत्रमा पानी प्रदान मा आउनुहोस्।
pretreatment आवश्यक छ?
यो फिड पानी भनेर पानी पास गर्न अनुमति दिन्छ एक porous सामाग्री को निर्माण गरिएको छ अकाल failure.The झिल्ली पैदा दूषण देखि झिल्ली रक्षा गर्न preconditioned भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तर सतह मा भंग ठोस को 99% सम्म अस्वीकार। यो भंग लवण केंद्रित छन् जहाँ तिनीहरूले बर्बाद discharged छन् पानी (नुनीन स्ट्रिम), स्वीकार्दैनन्। हटाउँदै कुराहरू पूर्व को आरओ सिस्टम दिँदै गर्न महत्वपूर्ण छ के यो आरओ प्रणाली फिड पानी मा भंग र निलम्बित ठोस को झिल्ली सतह साथ जम्मा गर्छन, सञ्चालन जारी do.As गर्न चाहनुभएको थियो गर्छन्। यी ठोस निर्माण गर्न अनुमति भने, तिनीहरूले अन्ततः पानी खण्डमा पनि झिल्ली मार्फत, throughput को एक हानि परिणामस्वरूप प्रतिबन्ध। (यो झिल्ली को throughput क्षमता सामान्यतः प्रवाह दर रूपमा उल्लेख गरिएको छ, र प्रति दिन झिल्ली सतह क्षेत्र को वर्ग फुट प्रति गैलन मा मापन गरिएको छ।)
यो एक पानी विश्लेषण प्राप्त गर्न आवश्यक छ?
को आरओ फिड पानी एक विस्तृत रासायनिक विश्लेषण (LSI, र sdi, वा CFI) संभावित foulants पहिचान को लागि पूर्ण आवश्यकता छ। यो कठोरता (क्याल्सियम र म्याग्नेसियम), बारियम, स्ट्रोनटियम, alkalinity, पीएच र क्लोरीन एक मापन समावेश गर्नुपर्छ। रासायनिक विश्लेषण देखि डाटा अधिकतम निर्धारण प्रणाली डिजाइन ईन्जिनियरहरु द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ
झिल्ली एरे दुवै मात्रा र जम्मा गठन को झुकाव कम र रिकभरी र प्रवाह दर विस्तार गर्नेछ।
के एक विशेष आरओ लागि सटीक pretreatments निर्धारण गर्छ?
एक शब्द मा: विश्लेषण। पानी को हरेक स्रोत फरक छ, र तपाईं यो विश्लेषण छ सम्म आफ्नो पानी मा के थाहा कहिल्यै। पानी विश्लेषण, LSI, र sdi, वा CFI मान एक विशेष आरओ प्रणाली लागि सटीक pretreatment आवश्यकताहरु प्रयोग गरिन्छ। पानी आपूर्ति अर्को एक स्थानबाट एकदम भिन्न भएकोले प्रत्येक pretreatment आवश्यकता फरक हुनेछ।
फीड पानी आरओ द्वारा नरम गर्न आवश्यक गर्छ?
आयन विनिमय मृदुकरण र झिल्ली सतह मा खनिज मात्रा गठन लागि सम्भावित कम लागि एक लोकप्रिय विधि हो। आयन विनिमय मृदुकरण यस्तो क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, बारियम, स्ट्रोनटियम, फलाम, र एल्यूमीनियम को झिल्ली तत्व गर्न क्षति रोक्न रूपमा scaleforming आयनों प्रतिस्थापन गर्न सोडियम प्रयोग गर्दछ। सोडियम प्रकारका धेरै घुलनशील लवण, उल्टो असमस प्रणाली द्वारा सजिलै अस्वीकार र सजिलै छैन छन् जो झिल्ली सतह मा खनिज तराजू गठन। एक sodiumcycle सफ्नर सोडियम क्लोराइड नुनीन संग regenerated छ। यो खर्च regenerant, को सफ्नर कुल्ला पानी संग, बर्बाद discharged हुनुपर्छ। यो किनभने आयन विनिमय उपचार गरे पानी मा उच्च धातु सामग्रीहरू छ कि आवेदन सिफारिस गरिएको छ यो छ।
एसिड इंजेक्शन आवश्यक छ?
अम्लीय समाधान झिल्ली लागि राम्रो छैन जस्तै कास्टिक समाधान तत्व झिल्ली उत्तिकै हानिकारक छन्। एसिड इंजेक्शन पीएच नियन्त्रण र फिड पानी मापन-निर्मित झुकाव कम गर्न आरओ pretreatment सिस्टम मा शामिल हुन सक्छ। को नुनीन धाराको मात्रा गठन झुकाव रूपमा LSI मापन +0,3 माथि छ भने एसिड इंजेक्शन संकेत छ। सल्फ्युरिक वा हाइड्रोक्लोरिक एसिड त यो उद्देश्य लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक antiscalant के गर्छ?
Antiscalants को आरओ झिल्ली को रासायनिक cleanings बीच अन्तरालहरू विस्तार प्रभावकारी हुन देखाइएको छ। यी उत्पादनहरू साधारण अकार्बनिक Phosphates, organophosphates र dispersants समावेश गर्न formulated छन्। केही Antiscalant अप dosed हुन स्ट्रिम मिडिया फिल्टर गर्न पूर्व सक्छ cationic पलिमर संग प्रतिक्रिया गर्न सक्ने नकारात्मक चार्ज पलिमर र dispersants समावेश गर्दछ। को Antiscalant यी पलिमर उपयुक्त हुनुपर्छ; अन्यथा, प्रतिक्रिया उत्पादन झिल्ली foul हुनेछ।
सबै प्रणाली सफाई रासायनिक आवश्यक छ?
प्रणाली दूषण देखि प्रवाह रक्षा र गुमाउन सबै प्रयत्न गरे तापनि अन्ततः झिल्ली सफाई रासायनिक आवश्यक हुनेछ। सफाइ गर्ने सफाई प्रक्रिया सरल बनाउन स्किड लागि welldesigned आरओ सिस्टम प्रावधान समावेश गरिनेछ। को स्किड को आरओ मोड्युलहरू पूर्ण रासायनिक सफाई पूरा लागि आवश्यक एक रासायनिक ट्यांक, समाधान हीटर, recirculating पम्प, नालियों, Hoses, र अन्य सबै जडान र फिटिंग समावेश गर्नुपर्छ।
एक-1402, Lvdi सोहो No.6, Zhangba 1st रोड, उच्च-टेक क्षेत्र, शीआन, शानक्सी, चीन
मोबाइल र Whats अनुप्रयोग: + 86-15877553984
टेलिफोन र फ्याक्स: + 86-029-6569-2269